Sida loo kiciyo WhatsApp iyadoon la hubin nambarka xaqiijinta - Kulanka Madasha | Golaha Moobaylka
Sida loo kiciyo WhatsApp adiga oo aan lahayn lambar xaqiijin ah
Qolka Ignatius | | Shabakadaha Bulshada, WhatsApp
Tan iyo markii la bilaabay 2009 ee iOS (sanad kadib waxay timid Android), codsiga farriinta WhatsApp wuxuu noqday kan ugu isticmaalka badan adduunka, codsi maanta ka badan 2.000 milyan oo isticmaale, oo aad uga sarreeya meelaha kale ee fariimaha la isugu diro sida Messsenger ama Telegram.
Laga soo bilaabo 2014, wuxuu ka mid ahaa shirkadda Facebook, ka dib markii uu bixiyay 19.000 milyan oo doolar, iibsasho aysan maamulladu falanqeyn waqtigaas iyo tan iyo maanta. ma helin ogolaanshaha Midowga Yurub. Ahaanshaha mid ka mid ah codsiyada qof walba rakibo mar kasta oo uu taleefannada beddelo, amniga marka hore.
1 Amniga WhatsApp
2 Hababka loo xaqiijiyo WhatsApp
2.1 Iyada oo loo marayo SMS
2.2 Adoo wacaya
3 Ku dhaqaaji WhatsApp adiga oo aan lahayn lambar xaqiijin ah
4 Waxaan ka helay lambarka xaqiijinta WhatsApp
5 Sida loo ilaaliyo akoonka WhatsApp
6 Waa maxay Xaqiijinta XNUMX-Talaabada ah ee WhatsApp?
Markaan ka hadlayo amniga, waxaan ka hadlayaa qaababka kala duwan ee shirkaddu na siiso si looga hortago dhinacyada saddexaad xadi karaa akoon WhatsApp ah oo ku isticmaal lambarka taleefankeena, maadaama tani ay tahay aqoonsiga kaliya ee ay adeegsato barxada.
Telegram iyo Messenger waxay adeegsadaan nidaamyo kale oo aqoonsi ah, in kastoo aan sidoo kale adeegsan karno lambarka taleefankeena, laakiin ikhtiyaarkan ma aha mid khasab ah. Markasta oo aan badalno lambarka taleefankeena, WhatsApp waxay u dirtaa lambar 6 lambar ah lambarka taleefanka ee aan soo galnay, oo ah lambar kuu oggolaanaya hubi inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee lambarka taleefanka in naloo isticmaalay.
Habkani wuxuu oggolaanayaa ku isticmaal WhatsApp taleefanka casriga ah oo leh lambar ka duwan midka aan isticmaaleyno, laakiin isla waqtigaas, sidoo kale waa khatar xagga amniga ah maadaama saaxiibbada dadka kale ay aad ugu fududdahay in la xado lambarka WhatsApp.
Hababka loo xaqiijiyo WhatsApp
Marka ay timaado xaqiijinta in aan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee lambarka aan rabno in aan ku isticmaalno WhatsApp, barnaamijka farriinta ayaa na siinaya laba ikhtiyaar:
Iyada oo loo marayo lambar 6-lambar ah oo aad noo soo dirto qaab SMS ah casriga ah.
Iyada oo loo marayo a Wicitaan taleefan kaas oo mashiin uu ku dhawaaqi doono lambarka 6 lambar ee aan u baahanahay.
Iyada oo loo marayo SMS
Si taas loo xaqiijiyo annagaa leh milkiilayaasha lambarka taleefanka ee aan rabno inaan ku isticmaalno farriin qoraal ah (SMS) waa inaan qaadnaa tallaabooyinka soo socda:
Markaanu furno arjiga, guji Aqbal oo sii wad.
Kadib dalabka annaga weydiisan doonaa rukhsad inaad noo soo dirto ogeysiisyo.
Kadib waxaan galnaa lambarka taleefanka kaas oo aan dooneyno inaan ku isticmaalno WhatsApp.
Ilbidhiqsiyo ka dib waxaan ka heli doonnaa nambarka SMS-ka taleefankayaga casriga ah in codsigu si otomaatig ah u akhriyi doono isla markaana mas'uul ka noqon doono gelitaanka nambarka la helay.
Haddii sabab kasta ha noqotee, aadan akhrinin lambarka, waxaan helnaa dalabka farriimaha, furi fariinta aan helnay oo geli lambarka WhatsApp.
Haddii aynaan dhammeynin helitaanka farriinta qoraalka ilbiriqsiyo ka dib markii aan galnay lambarka taleefanka, waxay u badan tahay inaanan helin. Si loo helo lambarkan, waa inaan dhagsii aniga I soo wac.
Ilbiriqsiyo kadib, waxaan heli doonaa wicitaanka (oo ku qoran luuqadeena iyo horgalaha caalamiga ah ee Ireland +44) taasoo muujineysa lambarka xaqiijinta ee aan ku qoreyno arjiga si aan u awoodno isticmaalka farriinta farriinta ee la xiriirta lambarka taleefankayaga.
Ku dhaqaaji WhatsApp adiga oo aan lahayn lambar xaqiijin ah
Sidaan ku aragnay qaybtii hore, WhatsApp waxay na siisaa laba habab oo kala duwan si loo xaqiijiyo inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee lambarka taleefanka, kaliya laba hab suurtogal ah in sidaas la sameeyo: SMS ama wicitaan.
WhatsApp waligeed nagama soo xiriiri doonto hab kale oo aan tan ahayn. Codsiga nooma ogola in aan sameysano emayl halka ay noo soo diraan lambarka xaqiijinta oo aan lahayn lambarkaas, codsigu ma awoodi doono inuu galo server-yada shirkadda oo uu la xiriiro dhammaan adeegsadayaasha adeegsada maalin kasta.
Internetka waxaad ka heli kartaa boggag internet ama fiidiyowyo YouTube ah oo kuu xaqiijinaya inay suurtagal tahay in la helo lambarka xaqiijinta ka boodida labada ikhtiyaar ee kaliya in WhatsApp noo diyaarineyso. Midkoodna hababka ay muujiso inay shaqeeyaan, gabi ahaanba midkoodna.
Hadday sidaas tahay, qof walba wuu sameyn lahaa, gaar ahaan kuwa ugu xiisaha badan isticmaalayaasha iyo asxaabta dadka kale. Internetka aan naqaano ee aan u isticmaalno maalin kasta, ma jirto hab lagu qariyo ama loo xaddido helitaanka macluumaadka noocan ah. Haddii ay suurtagal tahay in la xaqiijiyo WhatsApp iyada oo aan la helin lambar xaqiijin ah, macluumaadkan waxaa laga heli karaa Websaydhka Madowga ah (oo aan lagu qaldin Deep Web-ka) mana noqon doono mid bilaash ama raqiis ah.
Waxaan ka helay lambarka xaqiijinta WhatsApp
WhatsApp waxay u dirtaa SMS-ka lambarka xaqiijinta iyada oo loo marayo nidaam amni oo gaar ah kaas ma muujinayo lambarka taleefanka soo diraha, waxay kaliya muujineysaa in WhatsApp ay noo soo dirayso. Haddii aan helno, annaga oo aan codsan, lambarka xaqiijinta ee koontada 'WhatsApp', waa sababta oo ah qof ayaa isku dayaya inuu marin ka helo koontadayada bartaan.
Haddii aan markaa helno taleefan ama fariin qoraal ah oo codsaneysa lambarkaas, Waa in AANAN ka jawaabin fariinta, tan iyo hadaan sameyno, waxay awoodi doontaa inay u isticmaasho lambarka taleefankeena koontadiisa WhatsApp.
Haddii si caqli-gal ah aan ugu dhicinno dabinka, nasiib wanaag xalku waa iska fudud yahay, Maaddaama ay tahay inaan kaliya ka baxno WhatsApp oo aan codsanno lambarka xaqiijinta mar labaad markaad gasho arjiga markii ugu horreysay.
Sida loo ilaaliyo akoonka WhatsApp
Haddii aan dooneyno inaan ilaashanno koontadeena si aan cidina fursad ugu helin, gaar ahaan haddii aan fiiro gaar ah u yeelano talooyinka aan kaga faalooday qeybtii hore, WhatsApp waxay na siisaa Xaqiijinta laba-tallaabo.
Waa maxay Xaqiijinta XNUMX-Talaabada ah ee WhatsApp?
Xaqiijinta laba-tallaabada ah ee WhatsApp waxay noo oggolaaneysaa inaan dhisno PIN, lambar lambar ah oo kaliya oo aan ogaanno si aad awood ugu yeelatid lambarka taleefanka ee arjiga. Haddii aan u maleyno inaan wax ilaawno, WhatsApp waxay noo ogolaaneysaa inaan galno emayl inta lagu gudajiro hawsha waxqabadka si looga fogaado luminta marinka koontadayada WhatsApp.
Iimaylkan waxaan joojin karnaa oo keliya xaqiijinta XNUMX-tallaabo ah, laakiin nama tusi doonto lambarka xaqiijinta ee aan galnay. Haddii aan dhaqaajinno xaqiijinta laba-tallaabo ah, codsigu wuxuu si joogto ah noo xusuusinayaa inaan ku galno arjiga si looga ilaaliyo iska illowsiintiisa.
Haddii aan ilowno PIN-ka oo aanan soo galin emayl inta lagu gudajiray hawlgalka xaqiijinta labada tallaabo ah, waa inaan sugnaa 7 maalmood adigoon isticmaalin WhatsApp si madalku u xaqiijiyo lambarka taleefanka markale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » WhatsApp » Sida loo kiciyo WhatsApp adiga oo aan lahayn lambar xaqiijin ah